Amabhulogi Mayelana Nezinkukhu Okuphakelayo Izigidi futhi Okuphakelayo I-Crusher-Victor Pellet Mill
Ngokwenza pellets izinhlanzi, Iningi labantu lizokhetha okusayo okusakazwayo kwezinhlanzi okuyi-pellet. Njengoba izinhlanzi ezidonsa emanzini zintanta emanzini azisebenzi ukuba zidliwe ngezinhlanzi. Okwamanje, kunganciphisa umoya p …… ...
NgoMashi ,Umshini we-VICTOR pellet unikele ngomugqa wokukhiqizwa kokudla kwezinkukhu kumakhasimende e-Afrika,okuyindawo iMozambique.it ikakhulukazi ukukhiqiza i-pellet yenkukhu yokudla kanye ne-pelle feed feed ....
Izithako zokudla kwenja ziyehluka ngokuya ngohlobo lokudla kwezilwane ezifuywayo. Umehluko oyisisekelo phakathi kokudla kwezilwane okwenziwe ngamakhekhe nokwomile yinani lokufuma. Ukudla okungamisiwe kuqukethe phakathi 70 futhi 80% umswakama …………… ...
Ama-pellets wokudla kwezinkukhu enziwa ngezinto ezahlukene ,Ukuhlanganiswa kwezinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene kungahlangabezana nezidingo zezinkukhu zezakhi ezahlukahlukene. Okuphakelayo okuhlaza kusetshenziselwa kakhulu ukufaka i-vitam ……… ...
Abalimi beCatfish eNegeria njengamanje babhekene nezindleko ezikhuphukayo zokuphakelayo, eye yakhulisa izindleko zokukhiqizwa ezweni lonke. Abanye babalimi bathi kungenzeka baphinde bacabangele kabusha kwabo ……… ...
Lapho sithi izinkukhu nokudla kwemfuyo, akuchazi inkukhu noma ingulube kuphela. Ungenza okuphakelayo abanye okufana ne-turkey, idada, goose, inkomo njll .Kudingeka kakhulu kwezindleko zokukhiqizwa kwezinkukhu ngebhasi …………… ...
Ngokwanda okuqhubekayo kwezinhlobo zezilwane ezifuywayo,Izilwane ezifuywayo ezahlukahlukene zinezidingo ezihlukile zokudla kwezilwane ezifuywayo. Abathandi bezilwane abaningi abahogela ukudla kwezilwane ezifuywayo ngaphambi kokukhetha ukudla kwezilwane ezifuywayo .Ukupela amagama ngendlela evamile ku-hu …………… ...
Abanye abalimi bezinkukhu bajwayele ukondla izinkukhu ngezinhlamvu ezingavuthiwe ezifana nommbila, amabele, umunyu, njll. This is not only to reduce feed utilization but also harm chickens.it will cause more feed……...
gaya isando sokugaya isando
In inqubo yokuphakelwa kokuphakelayo kungenzeka kube nezithako eziningi ezidinga uhlobo oluthile lokucutshungulwa. Lezi zithako zokuphakelwa zifaka okusanhlamvu okusanhlamvu okuhlanganisiwe, Ummbila odinga ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana ……… ...